एनालग सिग्नल बन्द गर्नमा ढिलाई किन? | NewsMissile.com
Newsmissile February 16, 2018 समाचार, सूचना-प्रविधी0Comment
काठमाडौ । अहिले २१औं शताब्दीसँगै सारा जनताको मनस्थिति डिजिटल प्रविधिमा गइसकेको छ । सरकार भने मुकदर्शक बनेर बस्नुको शिवाय केही गर्न सकेको देखिन्न।
अब देशलाई नै डिजिटलमूखीतर्फ उन्मूख गराउँनु पर्छ भनेर ठाउँठाउँबाट वारम्वार जनआबाज बुलन्द नभएको पनि होइन।
एकातर्फ भने सरकारको पूर्व घोषित कार्यतालिका अनुसार केवल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा राज्यलाई अर्बौको नोक्शानी व्यहोर्नु परेको छ।
२०७४ बैशाख १५ गते सूचना तथा संचार मन्त्रालयले कात्तिक १५ बाट देशका विभिन्न ठूला ठूला सहरहरु अन्र्तगत महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा एनालग प्रविधिलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरि डिजिटल प्रविधिमा लैजाने निर्णयकासाथ घोषणा नै गरेको थियो।
सरकार आफैले घोषणा गरेको नीतिनियमलाई वर्ष दिन वित्न लाग्दा समेत आफैले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको कहासम्मको नालायकीपन हो ? यही प्वाइन्टभ्यूबाट हेर्दा पनि सरकारको ताकत र हविगतलाई आंकलन गर्न सकिन्छ।
सरकारले कार्यान्वयनको सट्टा कात्तिक १५ बाट लम्बाएर कात्तिक २८ हुँदै मङ्सिर मसान्तसम्म पुर्याए । यसरी म्याद थप गर्दै लैजादा सरकार आफैलाई र सर्बसाधारणलाई घाटा र कतिसम्म असर पर्छ भन्ने कुरोलाई ध्यान पुर्याएको देखिन्न।
केवल च्यानल नेटवर्क वितरकहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा जान जति अवधि थप गरेपनि समस्या जहाँको त्यही रह्यो भन्दै मन्त्रालयको एक टोली एनालग टिभी बन्द गर्ने अभियानमै उत्रिएका थिए।
यसै अनुरुप मन्त्रालयको टोलीले जबर्जस्त रुपमा स्पेश टाइम, स्काई, टिभी लिंक, सुबिसु, लगायत संस्थाबाट वितरित एनालग सिग्नल बन्द गरेको थियो भने केवल च्यानल वितरकबाट थप समय माग भएको भन्दै मङ्सिर मसान्तसम्मको अवधि वढाइएको थियो।
के अब सरकार नै एनालगमा रहिरहने कि डिजिटलमा ? के जनतालाई एनालगकै अन्यौलतामा राखिराख्ने त ? मन्त्रालयले एनालग सिग्नल बन्द गर्ने भन्दै एक्शन लिन थाले पश्चात अधिकांशले विभिन्न कम्पनीका डिजिटल टिभी जडान गर्न शुरु गरेका थिए । तर राज्यको अनुगमन फितलोका कारण अझैसम्म पनि ठूलो संख्यामा ग्राहकहरुले केवल टिभी नै हेर्न बाध्य छन् ।
अहिलेसम्म सरकारले एनालग सिग्नल बन्द गर्ने भन्दै १५,२०७४ केवल च्यानल बितरकको लाइसेन्स नबिकरण गरेका छैनन् । न त नविकरण गरिदिन्छ न त डिजिटलमै लैजान्छ यो अन्यौलताको भारी कतिसम्म बोक्ने र वोकाउने सरकारले ? यो अन्यौलतालाई चिर्दै चाँडो भन्दा चाँडो निकासको बाटो खुलाउनु जरुरी छ ।
गत पौष २३ गते एनालगबाट डिजिटलमा लैजाने भन्दै एक्सनमा उत्रिएपछी मन्त्रालय बिरुद्द अदालतमा रिट समेत परेकाले अनुगमनमा सुस्तता आएको मन्त्रालयको भनाई थियो तर त्यसपश्चात पनि कार्यान्वयन र अनुगमनले तिब्रता पाउन सकेन ।
नेपाल आइटीयूको सदस्य राष्ट्र भएका कारण २०१७ को डिसेम्बरदेखि नै एनालग प्रविधि खारेज गरि अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिमा जानु पर्ने बाध्यता छ।
यदि समयमै नेपाल सरकारले ध्यान नपुर्याउने हो भने नेपाल सूचना प्रविधिको हकमा कालोसूचीमा दर्ज हुने छ । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो डिजिटल प्रक्रियाको कामकारवाही अगाडी बढाई देशलाई नै डिजिटलमय प्रविधियुक्त बनाउन सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
Previous पदभार ग्रहण गरेसँगै नयाँ प्रादेशिक मन्त्रीहरु नियुक्त
Nextहर्सोउल्लासकासाथ ल्होछार अर्थात नयाँ वर्ष यसरी मनाउँदै